JingOS inotangisa yayo yekutanga ISO ... asi uchafanirwa kumirira | Linux Vakapindwa muropa
JingOS inotangisa yayo yekutanga ISO ... asi uchafanirwa kumirira kana iwe uchida kuyedza
Semunhu anoshandisa PineTab, ndinofanira kubvuma kuti chirongwa ichi chakandibata pandakatanga kuverenga nezvazvo. Pakutanga, uye madudziro atinoita Asingasviki mavhiki maviri apfuura, yaive yakagadziriswa inoshandurwa mupfungwa, uye rutsigiro runosimbiswa pane avo vaviri chete, asi JingOS icho chinhu chine yakawanda yekuona kukwezva, zvinoshanda uye handigone kuramba kuti ndinoda kuzviedza pahwendefa rangu.
Kwamaawa mashoma, chimwe chiitiko chenyaya iyi chave chiripo: JingOS ikozvino yawanikwa muAlpha 1 fomu, kunyangwe zvisiri sezvataizoda kune vakawanda. Ruzivo rwese rwunowanikwa pa Iyi link yeiyo forum foramu, uko isu zvakare tine iyo download link… Izvo zvinotibvunza zita uye email kutiisa pane yekumirira runyorwa. Kune zvese zvimwe zvinhu, ivo vapa ruzivo rutsva, senge rwakaverengerwa software uye chii chekutarisira mune ramangwana shanduro
1 Izvo zvinosanganisirwa muJingOS 0.6
1.1 Kugadzirira v0.7 uye v0.8
2 Zvichazviita here kuPineTab?
Izvo zvinosanganisirwa muJingOS 0.6
Izvo zvavakasunungura, uye izvo zvatinogona kurodha pasi kana chasvika nguva yedu chinyorwa chakamirira, iri JingOS 0.6, uye inosanganisira zvinhu zvakaita se:
Iyo JingOS desktop, iyo inosanganisira kukiya kwayo skrini, nzvimbo yekutonga, nzvimbo yekuzivisa, uye maneja webasa.
Zvako zvikumbiro zvepiritsi:
WPS Hofisi neChromium yakaiswa nekutadza.
Zviratidzo pane yekubata pani uye pachiratidziri chimwe chete, izvozvi pane iyo Surface Pro 6 uye Huawei MateBook 14.
Yakagadziridza iyo inobata mutyairi weSurface Pro 6.
Izvo zvakakosha kutaura izvozvo mutauro unotsigirwa nehurongwa Chirungu chete. Panyaya yeLinux, zvinokwanisika kuisa mamwe maapplication mune mimwe mitauro, asi kwete chero yeJingOS pachayo.
Kugadzirira v0.7 uye v0.8
JingOS App Chitoro.
Sevhisi pamusoro pemhepo, inozivikanwa seOTA (Pamusoro Pemhepo).
Zvizhinji zvevatsva vatongi vanodzora zvinoenderana naPlasma Mobile
Kuenderana neLinux desktop application kunovandudzwa.
Virtual keyboard, zvido zvesisitimu, maneja wefaira, nezvimwe, kubva kuJingOS.
Dzimwe shanduko dzinofanira kuziviswa gare gare.
Zvichazviita here kuPineTab?
Handidi kubheja pazviri. Chikwata chiri kuronga kuburitsa yakagadzikana vhezheni yeJingOS munaKurume, uye vane zvirongwa zvekuburitsa ARM vhezheni yeanoshanda system, asi yaizotanga kushandiswa mu piritsi rinogadzirira chirongwa. Tichifunga kuti chinangwa chako ndechekutengesa yako piritsi, zvinonetsa kuve netariro, asi hazvigone kutarisirwa kunze 100%. Chero zvazvingaitika, isu tichazoziva rumwe ruzivo munaKurume anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » JingOS inotangisa yayo yekutanga ISO ... asi uchafanirwa kumirira kana iwe uchida kuyedza